Ụdị egbu egbu ndị mmadụ - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ụdị egbu egbu
1. Ụdị okike na-egbuke egbuke na-eme ka mmadụ nwee ọdịdị mara mma
Ụmụ mmadụ dị ka Ụdị Okike nke dị n'elu ọnụ. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha nwee ọdịdị dị ebube
2. Ebube na-egbuke egbuke maka ndị ikom na-eji ejiji ink na-eme ka ha mara mma
Ndị na-achọ ịma mma ga-ahụ Ụdị Egwu Na-atụ Anya na mkpịsị ink nke a
3. Ebube a na-egbuke egbuke n'elu ogwe aka dị n'ihu na-eme ka ihe efu dị anya
Ndị mmadụ na-ahụ tattoo ejiri aka na ogwe aka ha na nku ejiji ink nke nku; egbu egbu egbu a na-eme ka ha yie ka ọ dị oke mma
4. Ogbugbu ndi mmadu na-egbuke egbuke n'elu ogwe aka di ala na-eweta anya di ebube
Brown ụmụ agbọghọ ga-ahụ nwa na pink ink imewe Ebube akara na ha ala ogwe aka; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dị ịtụnanya ma dị mma
5. Ikike e ji egbuke egbuke n'elu igbe na-eweta anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ dị ka mma egbuke egbuke n'elu ọkụ. Ụdị egbu egbu a dị mma.
6. Okpu egbuke egbuke n'ubu a na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ Brown ga-ahụ mma egbuke egbuke n'elu ubu ha na nhazi ime ink pink; egbu egbu egbu a na-eme ka ha maa mma
7. Eji egbuke egbuke na-eme ka mmadụ dị jụụ
Mmadụ na-enwe mmasị ịnwe akara egbuke egbuke n'elu ogwe aka nke aka. Nke a na-enye ọdịdị nwoke
8. Ebube ebube nke ejiri ejiji onk na-eme ka anya mara mma
Ụmụ nwanyị Brown ga-ahụ Ụdị Ogbugbu na akara ngosi ink; ihe a na-egbu egbu na-emetụta akpụkpọ ahụ ha iji mee ka ha yie ihe dị mma ma mara mma
9. Ogbugbu ndi mmadu na-egbuke egbuke na aka nri aka na-eme ka mmadu di nma
Ndị mmadụ ga-ahụ Ụdị Ogbugbu na aka nri ha. Ejiji egbu egbu a na-eme ka anya ha dị elu
10. Ngwaputa nke okike n'elu onu ogugu eme ka mmadu nwee anya iru
Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịnweta Ọdịdị Ekebe Ahụ n'elu ha. Eche egbu egbu a na-egosi ọdịdị anụ ọhịa ha.
11. Ngwaputa nke okike n'elu ụkwụ na-eweta anya di ebube
Ụmụ nwoke na-achọ na-ejiri anụ ọkụ na-acha anwụrụ ọkụ. nke a na-eme ka ha mara mma
12. Ikike e ji egbuke egbuke n'elu igbe na-eweta anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ dị ka mma egbuke egbuke n'elu akụkụ obi. Ụdị egbu egbu a dị mma.
13. Ebube na-egbuke egbuke na ụkwụ na-ele nwa agbọghọ anya
Ụmụ agbọghọ na-achọ ka a mara mma na-egbuke egbuke na ụkwụ ha iji gosipụta ọdịdị ha
14. Ebube ebube nke nwoke na nwoke na-ele anya
Ndị mmadụ na-enwe mmasị na-egbu egbu egbu na ụkwụ ha na ejiji onk. Ụdị egbu egbu a ga-eme ka ha nwee anya dị mma
15. Ebube a na-egbuke egbuke n'elu ogwe aka dị n'ihu na-eme ka ihe efu dị anya
Ndị mmadụ na-ahụ tattoo ejiri aka na ogwe aka aka ha na-emepụta ozi; egbu egbu egbu a na-eme ka ha yie ka ọ dị oke mma
16. Ogbugbu ndi mmadu na-egbuke egbuke n'elu ogwe aka di ala na-eweta anya di ebube
Ụmụ agbọghọ ga-enwe mmasị na mkpịsị akwụkwọ onk nke nwa okirikiri. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dị ịtụnanya ma dị mma
17. Ebube a na-ahụ maka ọkụ n'elu ọkụ na-eme ka anya nwanyi na anya
Ụmụ agbọghọ dị ka mma egbuke egbuke n'akụkụ ha. Ogbugbu egbu egbu a na-adọrọ mmasị ma mara mma.
18. Ogbugbu ejiri aka na nkpa aka na nkwekorita ink na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ na-ahọrọ Okirikiri okike site na iji mkpịsị aka ink dee ha; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
19. Ngwaputa ogwu di iche iche na-eme ka mmadu di nma n'anya
Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịnwe Ọdịdị Egwu na-egbuke egbuke na ụkwụ ha. Ogbugbu egbu egbu a na-eme ka ha nwee ọdịdị ihu abụọ.
20. Ihe nkedo ink na-egbuke egbuke na-eme ka nwanyị nwee ihu ọchị
Ụmụ agbọghọ na-eto eto ga-ahụ ọchịchịrị ejiri aka na nkpa aka ha. Ụdị egbu egbu a na-adọrọ mmasị n'anya ma mee ka ha dị mma
21. Ebube a na-ahụ maka ndị ikom nwere mkpịsị ink nke oji na-eme ka ha mara
Ndị mmadụ na-ahụ Ụdị Ọdịdị Eji Eji Eji Njikere Ink; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
22. Ụdị okike na-egbuke egbuke na-eme ka mmadụ nwee obi ike
Ndị mmadụ na-ahụ Ụdị Ọgwụ Egwu n'elu ha. Ihe a na-eme ka ha nwee obi ike
23. Ebube ebube nke dị n'azụ azụ na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ Brown ga-ahụ Ụdị ejiri aka na azụ azụ ha na ejiji ink ojii; egbu egbu egbu a na-eme ka ha maa mma
24. Ihe eji egbuke egbuke na-acha uhie uhie na oji ink na bicep na-eme ka onye dapper na anya n'ime nwoke
Ndị ikom na-acha aja aja na-acha ahụ aja n'anya na-egbuke egbuke pink na nwa ink imewe ha bicep; Ejiji egbu egbu a na-eme ka anya na-acha
egbugbu egbugbuokpueze okpuezeima ima mmamehndi imeweụmụnne mgbuudara okooko osisiakwara obirip tattoosegbu egbuegbu egbu mmiriegbugbu maka ụmụ agbọghọegbu egbu diamondUche obiarịlịka arịlịkaụkwụ akaegbu egbu ebighi ebingwusi pusiGeometric Tattoosegbu egbu maka ụmụ nwokeegwu egwuakpị akpịn'olu oluazụ azụna-egbu egbuegbu egbu okpumma tattoosaka akaAnkle TattoosNtuba ntughariechiche egbugbuagbụrụ eboỤdị ekpomkpaegbu egbu hennaenyí egbu egbuenyi kacha mma enyiakara ntụpọndị na-egbuke egbukekoi ika tattooaka mma akadi na nwunyendị mmụọ oziaka akaegbu egbu egbuna-adọ aka mmaEgwu ugoọnwa tattooszodiac akara akaraegbu egbu osisi lotusnnụnụọdụm ọdụm